Echiche 6 iji chọọ akwarium | Nke azụ
Echiche 6 iji chọọ akwarium mma
Natalia Cerezo | 13/09/2021 08:26 | Ngwa
Enwere ọtụtụ ihe ịchọ mma nke bụ nnukwu echiche maka ịchọ mma akwarium, site na okwute ma ọ bụ mkpisi ruo na ọnụ ọgụgụ kpochapụwo nwere igbe na ụdị dị iche iche ma ọ bụ karịa, dị ka painiapulu ebe SpongeBob bi.
Kaosinadị, Ọ bụghị naanị maka ịhọrọ ihe ịchọ mma nke kachasị amasị anyị maka akwarium anyị, kamakwa maka ịmara ndị anyị na -enweghị ike itinye., yana ịmara ka esi ehicha ha yana ụfọdụ ndụmọdụ gbasara ịchọ mma. Anyị ga -ekpuchi ihe a niile n'isiokwu a. Na mgbakwunye, anyị na -akwado ka ị gụọ post ọzọ a gbasara icho mma nke ala akwarium anyi ọ bụrụ na ịchọrọ echiche ndị ọzọ.
1 Echiche dị iche iche iji chọọ akwarium gị mma
1.1 Ajịrịja nkume ma ọ bụ ájá
1.3.1 Ru osisi
1.3.2 Osisi okike
1.5 Ihe ịchọ mma
1.6 Akwụkwọ eji achọ mma
2 Ihe agaghị etinye n'ime akwarium
2.2 Ihe okike ekeghị agwọ ọrịa
2.3 Ihe ịchọ mma akwadoghị
3 Otu esi ehicha ihe ndozi
4 Atụmatụ ịchọ mma
Echiche dị iche iche iji chọọ akwarium gị mma
O doro anya icho mma akwarium nwere ike ịbụ otu n'ime ihe omume kacha atọ ụtọ, ebe anyị nwere ike mee ka nlele nke akwarium anyị dị mma ma chụpụ ya ka ọ bụrụ ebe dị mfe nwere gravel anọ na osisi rọba kpọnwụrụ akpọnwụ. Kama nke ahụ, n'ahịa anyị nwere ọtụtụ nhọrọ:
Ajịrịja nkume ma ọ bụ ájá
Croci A4022043 Ajịrịja nkume maka ...
Croci A4000140 Ajịrịja nkume maka ...
Croci A4022047 Ajịrịja nkume maka ...
Ndabere nke akwarium ọ bụla, n'ụzọ nkịtị, bụ gravel ma ọ bụ ájá, nke a na -etinye na ala. Ọ bụ ezie na gravel na -abịa n'ụdị okwute (nke nwere ọdịdị anụ ahụ ma ọ bụ nwee agba, yana nha dị iche iche), ájá zuru oke maka azụ ndị ahụ na -eli onwe ha n'ime ya ma ọ bụ na -etinye oge ka ukwuu na ala na ebe obibi ha. , dị ka akpụkpọ ụkwụ.
Kaosinadị, mgbe ụfọdụ ajịrịja nkume bụ ihe ngwọta kacha mmaọ kachasị maka nkasi obi anyị. Dịka ọmụmaatụ, otu nnukwu ndọghachi azụ nke ájá bụ na ihicha ya dị oke arọ, na ọ na -agakarị ebe niile, yabụ ị ga -edochi ya ugboro ugboro.
Ọzọkwa, a na -atụ aro gị nke ukwuu ịhọrọ ihe okike, ebe ọ bụrụ na ha bụ sịntetik ma ọ bụ iko, ha agaghị ekwe ka ezigbo ahịhịa nje (cheta, dị mkpa maka akwarium) ga -apụta n'ụzọ dị mfe.
Osisi Vibury ...
Ihe ịchọ mma Nobby maka ...
Ịchọ Mma Hygger ...
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inye aquarium gị mmetụ mara mma, ị nwere ike họrọ ndekọ. Enwere ọtụtụ ogwe ụgha na -ekpuchi anya n'ụlọ ahịa anụ ụlọ ma ọ bụ Amazon nke na -e imitateomi okike nke ọma, yana, sịntetik, ha anaghị ere ure, nke nwere ike inye azụ gị ebe nchekwa na -enweghị njedebe.
Agbanyeghị na enwere ike iji osisi eke n'ime akwarium, ị ga -akpachapụ anya, n'ihi na ọ bụ okwu dị oke mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ụdị osisi ụfọdụ, na -ahapụ acid n'ime mmiri nke nwere ike igbu azụ gị. Ọtụtụ na -esekwa n'elu, yabụ na ị ga -ebu ụzọ gwọọ ha ma ọ bụ jiri okwute tụọ elu ha, dịka ọmụmaatụ. Ya mere, a naghị atụ aro ka ị jiri osisi ị chịkọtara n'onwe gị, n'amaghị ụdị ihe dị iche iche yana n'ebughị n'uche ma ọ bụrụ na ha ejiri ọgwụ na -egbu egbu.
NICREW RGB Plus ikanam Light ...
Osisi Ha bụ echiche ndị ọzọ mara mma iji chọọ akwarium anyị mma. Ha nwere ike ịbụ ihe aka mere ma ọ bụ eke, dị ka anyị ga -ahụ n'okpuru.
O doro anya ha kacha dịrị mfe ilekọta (nke bụ isi n'ihi na ha anaghị achọ nlekọta). Na mgbakwunye, ha na -enwekarị ụcha mara mma ma na -enye azụ gị ebe nchekwa na -enweghị atụ egwu imetụta ahụike ha. Na mgbakwunye, ha anaghị anwụ ma ọ bụ na -ere ure, nke nwere ike hapụ irighiri mmiri n'ime mmiri nke na -ebuli ọkwa nitrogen, nke nwere ike imesi ike ma mee ka azụ gị daa ọrịa.
Agbanyeghị na akwadoghị ha maka ndị mbido, osisi okike nwekwara uru ha. Dịka ọmụmaatụ, lekọtara oxygen nke ọma mgbe ị na -eji CO2, ihe a na -akwadokarị maka azụ gị (cheta na ha chọrọ oxygen ka ha dịrị ndụ). Agbanyeghị, mgbe ị na -azụta osisi sitere n'okike, gbaa mbọ hụ na ha batara n'ime ite mmiri agbazere ka ị ghara ịhụ ụzọ nkwụsị, dị ka ejula, nwere ike wakpo akwarium gị.
Mmiri ajịrịja nkume Natural ...
Nkume, dị ka ndekọ, bụ otu n'ime ihe ochie iji chọọ akwarium ọ bụla mma. Ị nwere ike ịchọta ha n'ọtụtụ ebe na, na nke a, iji okwute eke abụghị ihe egwu dị ka nke osisi. N'agbanyeghị nke ahụ, iji jide n'aka na ọ nweghị nchekwa iji ha, gbanye ha mmiri ruo ụbọchị ole na ole wee lelee na pH agbanwebeghị.
Nnwale ọzọ iji chọpụta na okwute ị họọrọ maka akwarium gị enweghị acid nwere ike igbu azụ gị, ngwa ngwa, bụ wunye mmanya n'elu nkume. Ọ bụrụ na ịmeghị ihe ọ bụla, okwute ahụ enweghị nsogbu. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ na -afụ, o nwere asịd, yabụ na ị gaghị etinye ya na akwarium. Enwere ike iji hydrochloric acid nwalee nnwale a, mana ọ dị oke egwu (a na m agwa gị site na ahụmịhe: nwanne m nwanyị, onye bụ ọkà mmụta ala, otu oge hapụụrụ karama mmiri zuru ezu ọ fọkwara obere ka m nwụọ).
A na -ere ọmarịcha ihe ịchọ mma n'ọtụtụ ebe na, nke ka mma, a kwadebere ha nke ọma imikpu n'ime mmiri, yabụ na ị gaghị ata ahụhụ maka azụ gị. Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, weta ụdị ihe oyiyi dị iche iche dị ịtụnanya, ọkachasị n'etiti ndị kacha ewu ewu (ụdị ihe dị iche iche, igbe akụ, ụgbọ mmiri dara, okpu agha, mbibi, ụlọ ọwụwa anyanwụ, Buddha ...) gaa na ndị ọzọ na-eche echiche (Stonehenge, painiapulu SpongeBob, Star Wars AT-AT, ugwu mgbawa, olu, okpokoro isi. ...).
Akwụkwọ eji achọ mma
Mpempe akwụkwọ posta Balacoo ...
Mpempe akwụkwọ BETESSIN 2pcs ...
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inye aquarium gị ntakịrị omimi, akwụkwọ ahụaja bụ ihe ngwọta. A naghị ese ha ese n'ezie, mana ha bụ foto ebipụtara, na -adịkarị na akwụkwọ nnyapị, nke ị nwere ike ịrapara n'azụ akwarium (doro anya na mpụga). Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu dị ka oke osimiri, n'agbanyeghị na ị nwekwara ike ịhụ ndị ọzọ nwere oke ọhịa, nsụda mmiri ... Ọ bụrụgodi na ịnweghị ike ịhụ foto ọ bụla masịrị gị, ị nwere ike họrọ ibipụta otu. A na -atụ aro nke ukwuu na n'ọnọdụ a ị ga -edobe ya, ebe ọ bụna, ọ bụrụgodi na ọ pụtaghị na mmiri, ọ ga -emecha nwee mmiri.
Ihe agaghị etinye n'ime akwarium
Enwere otu usoro nke ihe na -adịghị mma itinye na mmiri, dị ka anyị ga -ahụ n'okpuru, na enwere ike ịnwa gị imikpu n'ime mmiri. Dị ka ọmụmaatụ:
Coral mara mma, mana ọ na -ejupụtakarị nsị na nje nke nwere ike imebi usoro ihe ndị dị na mmiri gị. Na mgbakwunye, coral nwụrụ anwụ nwere agba na -adịghị mma na ihe jọrọ njọ, ihe adịghị mma, yabụ na ọ ga -abụ ihe amamihe dị na ya karịa ịhọrọ nhọrọ aka mana ọ ga -adị jụụ ma na -amasị anya.
Ihe okike ekeghị agwọ ọrịa
Tupu anyị enyela gị echiche ole na ole ị ga -eji gwọ osisi na okwute okike ndị ịchọrọ ịgbakwunye na mmiri. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ejighị n'aka na ị bụ onye ọhụrụ na mpaghara a, ọ ka mma ịga maka okwute na osisi.
Ihe ịchọ mma akwadoghị
Onye India plastik nwere ike ịmasị mma na akwarium gị, mana ị ga -amatarịrị na ọ bụghị ihe ịchọ mma ka emikpu n'ime mmiri, yabụ nwere ike bụrụ nsí na azụ na osisi gị. Otu ihe ahụ na -eme na "ihe ịchọ mma" ndị ọzọ ị na -emebeghị ma ọ bụ nke ebughị n'obi dị ka nke a, dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ ego, mineral, iko e sere ese ...
Otu esi ehicha ihe ndozi
Ọtụtụ mgbe, dị ka ọ pụtara, ị ga -ehicha ihe ịchọ mma ị nwere n'ime akwarium gị. Maka ya:
Nke mbu ọcha algae na wuru osisi nke ị nwere n'ime akwarium na -ewepụghị mmiri yana ahịhịa. Adịla ike ike ma ọ bụrụ na ịchọghị ibu ha.
Mgbe ah hichaa gravel site na ala jiri oghere gravel. Site na usoro a ị gaghị asachapụ okwute, mana ị ga -enwe ike iji ya gbanwee ma ọ bụ mejupụta mmiri.
Site n'ụzọ ọ bụrụ na ị na -ehicha ihe ịchọ mma n'ime, ejikwala ahịhịa siri ike ma ọ bụrụ na ị chọghị ịcha ihe oyiyi ahụ.
Ọ bụrụgodị na ha dị ole na ole usoro dị mfe, eziokwu bụ na ọ bụ otu n'ime ihe kacha arụsi ọrụ ike mgbe a na -edobe akwarium, mana ọ dị ezigbo mkpa idobe ịdị ọcha.
Atụmatụ ịchọ mma
N'ikpeazụ ihe akwarium gị dị mma ma ọ bụ dị ka ngwakọta nke nwere puku ihe nke a na -ahụghị azụ ya dabere na ego anyị mefuru ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ihe oyiyi anyị tinye. Dị ka ọmụmaatụ:
Chebara ihe ndia echiche ohere kedu ihe ị nwere na gịnị ka ịchọrọ itinye (osisi wuru ewu ma ọ bụ ihe okike, ọnụọgụ ...)
Ọ bụrụ na ọ bụ embara igwe, isiokwu nke osimiri ga -aka mma, ebe ọ bụrụ na ọ bụ mmiri dị mma, osimiri.
Chee echiche ụdị gravel ma ọ bụ ájá suut azụ gị.
Ejikọtala ọtụtụ ihe ọnụ ọ bụrụ na ịchọghị imesi azụ gị ike ma ọ bụ nwee nnukwu akwarium zuru oke. Osisi okike na -achọkwa ohere.
Na-atụle tinye ụfọdụ mmewere nwere oghere ebe azụ nwere ike zoo.
Otu oke nke na -arụ ọrụ nke ọma bụ ịhọrọ itinye nnukwu mpe mpe akwa na etiti di na nwunye na obere.
Site n'oge ruo n'oge bụ A na -atụ aro ka ị kwaga ihe oyiyi na ihe ịchọ mma na ala nke akwarium (o doro anya na nke a anaghị emetụta osisi eke) inye ụdị dị iche iche maka onwe gị na azụ gị.
Anyị na -atụ anya na echiche ndị a iji chọọ akwarium mma bụ ihe nduzi iji mee ka nke gị dị mma. Gwa anyị, ọ dịtụla mgbe ị chọrọ akwarium mma ma ọ bụ ọ dị gị ka furu efu? Ị bụ karịa osisi sitere n'okike ma ọ bụ nke wuru? Enwere ihe ịchọ mma nke masịrị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Echiche 6 iji chọọ akwarium mma
Ihe nzacha akpa akpa akwarium